Factory poti-dite - Mpanamboatra dite China, Mpamatsy
❤ [TANINDRAZANA & FAHASALAMANA]: ny siny fitaratra dia ny habeny mety indrindra amin'ny fitehirizana zava-manitra, anana, fitohanana, hitehirizana, teas ary maro hafa. Ny habe tsirairay dia mety tsara amin'ny fampiasana isan'andro.
❤ [FAHASALAMANA & SAFETYT]: Ny fitoeran-tsinay amin'ny vera tsy misy poizina sy tsy misy BPA dia tena salama sy azo antoka ho an'ny ankohonanao. Manome fanoherana ambony noho ny fahatapahana izany. Ny setany tsirairay dia tonga am-pilaminana anaty boaty misy mpizara mba hisorohana ny fahatapahana mandritra ny fandefasana.
❤ [FRESHER & CLEANER]: Ny lambam-baravarankely mora misokatra sy manidy, ary ny vava malalaka dia manamora ny famenoana sy ny famoahana azy. Ny kaontenera fitaratra tsirairay dia voaisy tombo-kase tsara, miaraka amin'ny gasket silikônika ary clamp fanidiana vy tsy miovaova hahazoana antoka fa madio sy madio ary madio ny sakafonao mandritra ny fitehirizana.
❤ [STYLE FASHION & MORA MORAZANA]: Ny tavoara dia manana endrika am-bolo izay ho an'ny trano sy orinasa rehetra. Ampiasao ny kaontenera handefa kafe, dite, cocktail na hamoronana kanto.
❤ [azo ovaina]: mora ny manasa ny siny ary azo ampiasaina indray hatrany hatrany. Ny veromanitra dia tsy manalefaka, mitazona fofona, na mamoaka simika ao anaty sakafo.
500 ~ 1000ml tavoara fitaratra mangarahara mifangaro